Xubno ka tirsan al-Shabaab oo la sheegay in lagu dilay deegaanka Dooynuunay ee Gobolka Bay…. – Hagaag.com
Xubno ka tirsan al-Shabaab oo la sheegay in lagu dilay deegaanka Dooynuunay ee Gobolka Bay….
Posted on 26 Maarso 2020 by Admin in National // 0 Comments
Sarakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ayaa sheegay in deegaanka dooynuunay oo qiyaastii 18 kiilo mitir u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ku dileen 12 xubnood oo ka tirsanaa Al-shabaab kadib markii ay isku dayeen inay soo weeraraan fariisinka Ciidanka Xoogga ee degaankaasi.
Taliyaha Qeybta 60aad ee Ciidamanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Sareeya Guuto Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo wareysi siiyay Idaacada dowladda isagoo ku sugan jiida hore dagaalka ee aaga dooynuunay ayaa sheegay in Al-shabaab uu khasaaro xoogan lagu gaarsiiyay dagaalkaasi sida uu hadalka u dhigay.
Jeneraal Maxamed Shiikh ayaa tilmaamay in Alshabaab ay ka dileen ku dhawaad 12 ka mid ah dagaalamayaasha Alshabaab isaga oo sheegay in ay dhaawacyo soo gaareen tira intaas ka badan.
Shalay ayay aheyd markii deegaanka Dooynuunay ee gobolka Bay uu ka dhacay dagaal khasaaro geystay oo dhexmaray Ciidamada Dowladda iyo Alshabaab kaas oo guulo ay ka sheegteen Ciidamada Milatariga Soomaaliya.